Sebenzisa inkonzo yokufota eyiFulfillPanda kuya kukunceda ukuba unyuse izinga lakho lokuguqula! Imveliso yokufota kumaqonga eCommerce yinto yethu ekhethekileyo studio sethu ese China. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezicelo ezithile.
UKUTHENGA UKUTHENGA NGOKUTSHINTSHA
Ulawulo lwempahla yenye yezona zinto zixhalabisayo kwishishini ngalinye elibandakanyeka kwimisebenzi yorhwebo, ngakumbi ukuthengwa koluhlu. Nangona kunjalo, njengoko ishishini le-e-commerce likhulile, izinto ezixhalabisayo ziye zanyamalala, enkosi kwindlela entsha yokubonelela ngoncedo eya isiba yinto eqhelekileyo.
IINGXAKI ZOKUTHENGA NGOKUTSHINTSHA
Ukuvela kokuhambisa ngenqanawa njengenkqubo yokuhanjiswa kwevenkile kubangele ukuba inkampani ingazithengi kunye nokugcina izinto ezithengisayo. Umthengisi oshiye phantsi uyayithengisa imveliso kwaye angayithenga kwiqela lesithathu (umenzi, umthengisi wevenkile, okanye omnye umthengisi) okanye kungenjalo enze iinkonzo zeearhente ezilahlayo ukulawula ukuthengwa kwempahla kunye nokuthumela.
Ngenxa yoko, ukwehla kuguqula ishishini libe yimarike apho abathengi banokungena babeke iiodolo. Emva kokuba umthengi ebeka iodolo, uhlawula umthengi, kwaye iarhente yokulahla imali iyakuhlawula. Awusoze ube nexhala malunga nokufumana abathengisi ababalaseleyo kwiimveliso zakho ngamaxabiso asezantsi. Awuzukuba naxhala malunga nokugcinwa kwemveliso okanye ukuhanjiswa kwayo.
KUTHENI UKHETHA IFULFILLPANDA?
KwiFulfillPanda, siyiphatha inkampani yakho ngokungathi yeyethu.
Awuyi kucinga ngokufumana ababoneleli ababalaseleyo kwiimveliso zakho ngexabiso elifanelekileyo! Ukufezekisa iPanda kufuna ukuthatha ubunzima emagxeni akho.
Sisebenzisa abafowunelwa bethu bezentengiso, sifumana iikowuteshini zamaxabiso ezivela kubavelisi, abathengisi abathengisayo, kunye nabathengisi kwaye sithethathethane ngamaxabiso aphambili kwiimveliso zakho.
Elona xabiso liBalaseleyo KUMNIKEZELI OBALASELEYO
Iqela lokuthenga leFulfillPanda liyazi apho imvelaphi yezinto ezisemgangathweni kufuneka zenziwe ngokoluhlu lweempahla, sihlala sifumana ibhalansi phakathi komgangatho nexabiso.
Enkosi kwimithamo yethu yokuphatha yemihla ngemihla, siyakwazi ukufumana esona sivumelwano sihle malunga nevolumu yethu yokuthenga eya kuthi yehlise iindleko zakho ubukhulu becala.
Sisoloko sijonga kumthengisi ngeemveliso ezihamba-phambili ke ngoko uya kwaziswa nje ukuba siphumelele kwaye ngenxa yokuba sakhe ubudlelwane obuqinileyo nomthengisi, bahlala besinika elona xabiso liphezulu kangangoko banako.
Ngapha koko, awuyi kuba nexhala lokuphela kwesitokhwe.
Iya kuba yeyethu ukugcina iso lakho kwisitokhwe, siphinde siyihlengahlengise, kwaye siyicwangcise apha kwiFulfillPanda.
Nxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya!